BUKA: UManana enika amantombazane ama-pads | News24
BUKA: UManana enika amantombazane ama-pads
Johannesburg - OwayeyiSekela likaNgqongqoshe wezeMfundo ePhakeme, uMduduzi Manana, kubonakala sengathi wenza konke okusemandleni akhe ukubuyisa isithunzi sakhe kulandela ukusula esikhundleni sakhe ngenyanga edlule.
UManana, osayilungu le-ANC ePhalamende, wesule esikhundleni sakhe kulandela ukubhekana necala lokuhlasela abantu besifazane ababili ekilabhini, iCubana Lounge, eFourways.
Isigameko senzeke ngemuva kwengxabano eyayiphakathi kukaManana noMandisa Duma. UDuma kusolwa ukuthi wabiza uManana ngesitabane okuyikho okwacasula uManana.
OLUNYE UDABA:Siyakwamukela ukusula kukaManana kodwa icala kumele liqhubeke
Ingxoxo eqoshiwe, lapho uManana ezwakala kuyo evuma isigameko, etshela umfowabo wesisulu ukuthi wasishaya ngempama.
Kubonakala sengathi uManana unomlando wokushaya abantu besifazane ngemuva kokuvela komunye wesifazane othi wamshaya ekilabhini ese-Ermelo. Laba bobabili bavulelana amacala kodwa abuye ahoxiswa, kuqinisekisa amaphoyisa.
Leli lungu lePhalamende linenhlangano enikezela amantombazane esikole ngemisubel (pads).
Le nhlangano isebenzisana neMia Sanitary Towels, ivakashele isikole iWalter Cingo Secondary eFlagstaff, e-Eastern Cape, ihambise imisubelo neminye imikhiqizo.
Bathe inhloso yalokhu, ukunciphisa ukulova kwamantombazane esikoleni uma esesikhathini kanye nokubuyisela isithunzi sawo.